Waagihimiraatti namoonni sababa beelaan du’aa jiraachuu jiraattonni himan – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsWaagihimiraatti namoonni sababa beelaan du’aa jiraachuu jiraattonni himan
Waagihimiraatti namoonni sababa beelaan du’aa jiraachuu jiraattonni himan
SEKOTA COMMUNICATIONS OFFICE
Bulchiinsa sab-lammii Waagihimiraatti namoonni baay’een sababa beelaan du’aa jiraachuu naannicha irraa jiraattotnii fi qondaalonni mootummaa gara Baahirdaariitti dhufan BBCtti himan.
(bbcafaanoromoo)–Bulchiinsa sab-lammii Waagihimiraatti Itti-aanaa bulchaa kan taha Obbo Tasfayee Gabiree jiraattotni naannichaa ji’oota afur darbaniif deeggarsa homaa argatanii akka hin beekne BBCtti himan.
Magaalaa Sablammichaa kan taaate Soqoxaa dabalatee magaalotni godinichaa kaan to’annoo humnoota TPLF jala galuu isaanii irraa kan ka’e jiraattotni deeggarsaan jiraatan irra caalaan waggaa darbe ji’a Adoolessaa kaasee deeggarsa homaa argatanii hin beekan jedhan.
Waggaa kana waraanni naannoo Tigiraayitti erga jalqabee gara naannoo Amaaraa bulchiinsa Waagimiiraatti bababl’atee aanoleen godinichaa hedduun deeggarsa namoomaaf cufaa tahanii turuu isaanii himan.
Jiraattotni BBC’n dubbise akka jedhanitti daandiin naannichaa Laalibelaas tahe Soqoxaa waliin wal qunnamsiisu erga Adoolessa 9/2013 jalqabee cufamuu isaa irraa kan ka’e dhiyeessiin deeggarsa namomaas tahe qorichaa guutummaa guutuun dhaabbachuun isaa rakkinicha hammeesseera.
Sababa kana irraa kan ka’e jiraattotni godinichaa beela jabaa fi dhukkuba hamaaf saaxilamuu isaanii qondaalota mootummaa dabalatee jiraattotni BBC’n dubbise himaniiru.
Komishiniin Ittisa Balaa, Wabii Nyaataa fi Deeggarsa Addaa naannoo Amaaraa naannichatti namootni gara miliyoona shanii tahan deeggarsa nyaataa ariifachiisaa akka barbaadan himeera.
Akka ibsa komishinichaatti yoo tahe naannolee humnootni finciltootaa TPLF to’atan keessaa haadholii, ijoollee fi dhukkubsattotni deddeebiin yaalaman 110 tahan sababa hanqina nyaataa, qorichaa fi bishaaniin lubbuun isaanii darbeera.
Komishinichi sababa caasaan mootummaa diigameef lakkoofsa namoota sababa hanqina nyaataa fi yaalaan du’anii beekuun akka hin danda’amne himan. Lakkoofsi isaa kanaa ol tahuu akka malus himaniiru.
Itti dabaluun Kaabaa fi Kibba Wallootti gar-tokkee Kibba Gondar akkasumas Waagihimiraa keessa namootni bakka biraa irraa buqqa’anii jiraatanii fi jiraattotni bakkichaa miliyoonotaan lakkaa’aman deeggarsa namoomaa ariifachiisaa akka barbaadan himan.
Itti aanaan bulchaa godina Waagihimiraa Obbo Tasfaayee Gabiree naannicha hidhattootni TPLF to’achuu isaanii irraa kan ka’e namootni baay’een qe’ee isaanii irraa buqqa’aniiru.
”Sochiin dinagdee guutummaa guutuu addaan citeera. Karaa adda addaa dhaabbilee idil-adunyaaf rakkoo keenya beeksifnus homaa nuu dhaqqabuu hin dandeenye. Dagatamneerra,” jedhan bulchaan kun.
Qe’ee fi qabeenya isaaniirraa sablammiin buqqa’an 50,000 tahan birqabaan deeggarsa namoomaa argataa kan jiran tahus, isaanumtuu rakkoo keessa jiraachuu isaanii himan.
Bulchiinsa sablammii kana keessaa namootni kuma 635 tahan rakkoo hamaaf saaxilamaniiru kan jedhan bulchaan kun karaa miidyaalee namootni sababa beelaan du’uu kan himamu odeeffannoo qabaachuu himanii lakkoofsa isaa garuu isa ibsamuun ol dabaluu akak danda’u himan.
Bulchaan kun jiraattotni godinichaa %90 kan tahan durumayyuu deeggarsa seeftineettiin kan jiraataa turan tahuu himuun humnootni TPLF gara naannichaatti galuu hordofee garuu deeggarsi himaa akka hin dhiyaanne himan.
Sablammii kana keessaa kan tahan Obbo Wandimuu Wadaaj aanaa Gaazgibilaa irraa kanneen tibbana gara Baahirdaar dhufan keessaati.
Akka isaan jedhanitti beelli hamaan isaan mudachuu irraa kan ka’e namoota humna hin qabne irraa kan hafe warri kaan naannicha gadhiisanii gargaarsa barbaacha akka bahaa jiran himan.
”Maatiin ijoolleenkoo illee yoo naaf oolan jedhanii gara Abinnatii fi Baahirdaaritti ergaa jiru. garuu asiis gargaarsi hin jiru,” jedhan.
Aanaa isaanii keessa gandootni 21 akak jiran kan himan Obbo Wandimmuun sababa beelaan yoo xiqqaate guyyaatti namni tokko yookaan namni lama akka du’u himan.
”Hanga yeroo murtaa’eetti namootni waan qaban irraa walii liqeessuun nyaachaa turan. Yeroo murtaa’een booda garuu namootni humna hin qabne akka malee beela’uu isaanii irraa kan ka’e dargaggootni mana mana irra deemnee kadhachuun isaan gargaaraa turre. Amma garuu isaan dhiisnee waan dhufneef jiraachuu isaanii fi du’uu isaanii waan beeknu hin qabnu.”
Aanaa kanatti itti gaafatamaa waajjira komunikeeshinii mootummaa kan tahan Obbo Solomoon Ma’aazaa aanichatti namootni beelaan du’aa jiraachuu mirkaneessaniiru.
Odeeffannoo aanaalee hunda keessa jiran qindeessuun ulfaataa tahuu kan himan Obbo Solomoon, yoo xiqqaate sababa beelaan namootni sadii isaan beekan lubbuun darbee sirna awwaalchaa isaanii irratti argamuu himan.
Aanichatti namootni 23,000 tahan deeggarsa seeftineettiin jiraachaa akka jiran himanii irra caalaan isaanii deeggarsa kan argatan ji’a Caamsaa dura tahuu himan. Ji’a Adoolessaa keessa ammoo yoo xiqqaate namootni 6,000 tahan rakkoo hamaa keessa kan jiran deeggarsa ariifachiisaa isaan barbaachisa ture jedhan.
Humnootni TPLF naannicha galuu hordofee tajaajilli akka ibsaa, bishaanii fi baankii adda cituu isaa fi daldallis dhaabbachuu isaan rakkinichi hammaachuu himan.
Kana irraa kan ka’e dhiyeessiin dhibee hanqini mudateera. Gatiinis akka malee qaala’uun ashaboo kiiloon tokko hanga Birrii 100tti gurguramaa jiraachuu Obbo Solomoon himan.
Bulchaan godinichaa obbo Tasgaayeen kanaan alatti ”mootummaa waliin hidhata qabdu, odeeffannoo fidaa jedhamuun namootni baay’een ajjeefaamaniiru” jedhan.
BBC’n naannichatti miidhaa humnootni TPLF geesisan jedhu ilaalchisee qaama walabaa irraa odeeffannoo hin arganne. UN jalatti Sagantaan Nyaata Adunyaa naannoo Tigiraay, Affaarii fi Amaaraatti jiraattotni miliyoona torbaa ol beelaaf saaxilamuu malu jechuun isaa ni yaadatama.
Naanno Tigiraayitti qofa namootni miliyoona 5.2 ol tahan deeggarsa nyaataa ariifachiisaa akka barbaadan beeksisee ture.
Obboleeysi keenya murteeysaan(Teknoon) du'a Oromoon hundi du'aa jiru du'e!
Obboleeysi keenya murteeysaan(Teknoon) du'a oromoon hundi du'aa jiru du'e! Duuti nuuf haara miti silaa osoo…
Ajjeessuu DHaqanii Du'uunis jira !!
#Ajjeessuu DHaqanii Du'uunis jira !! #Reeffa gochuuf deemanii reeffa ta'anii yoo galan..... Harargee lixaatti WBO…
Uummatni Oromoo hidhannoo hiikkachiifamaa jiraachuu: Ona Gindabarat DW International አማርኛ ዜና ሰዓት 01:30፣ መስከረም 19/2013…
Oromia/OMN: Campaign of mandatory and political prisoners (Nov 5 2021)
Breaking news : The Oromia regional administration organized a demonstration